actlenguas · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny actlenguas
Antsafa12 Mey 2020
Antsafa niarahana tamin'i José Chuvé Mengarí, mpikatroka nomerika amin'ny fiteny Bésiro
Antsafa09 Mey 2020
Tantara mikasika ny actlenguas
Mediam-bahoaka 08 Aogositra 2020
Tongava manatevina laharana anay amin'ny andiany fahatelo amin'ny fifanakalozana ety anaty aterineto momba ny fikatrohana nomerika ho an'ireo fiteny teratany, izay hatao ny Alarobia 12 Aogositra 2020
Mediam-bahoaka 06 Jolay 2020
Fantaro misimisy kokoa i Jermani Ojeda Ludeña. Izy no hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas ny 08 hatramin'ny 14 Jolay 2020 ary hiresaka momba ny asa ataony ho an'ny fiteny Quechua.
Antsafa natao tamin'i Alcides Javier Torres Gutt, mpikatroka nomerika ho an'ny fiteny Guaraní
Mediam-bahoaka 28 Jona 2020
Fantaro misimisy kokoa i Alcides Javier Torres Gutt. Izy no hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas ny 15 hatramin'ny 21 Jona 2020 ary hiresaka momba ny asa ataony ho an'ny fiteny Guaraní
Antsafa 18 Jona 2020
Fantaro misimisy kokoa i Elena Tambriz. Izy no mpampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas ny 1-7 Jona 2020 ary mampita ho antsika ny asany ho fanohanana ny fiteny K’iche’.
Antsafa 10 Jona 2020
Fantaro bebe kokoa ny momba an'i Claudio Hernandez. Hampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas izy ny 13-19 Aprily 2020 ary hifantoka amin'ny fiteny Mixtec (Tu’un Savi), fitenim-paritra Mixtepec.
Antsafa nifanaovana tamin'i Tzintia Montaño, mpikatroka nomerika amin'ny fiteny Mixtec
Antsafa 11 Avrily 2020
Fantaro bebe kokoa i Tzintia Montaño. Hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas izy ny herinandron'ny 9 ka hatramin'ny 15 Martsa 2020 ary hilaza aminao momba ny asany amin'ny fiteny da’an davi, na Mixtec avy any amin'ny sisintanin'ny Puebla-Oaxaca.